ဓာတ်ခွဲခန်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနောက်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်တုန့်ပြန်မှု (၂၀၀၄) - Your Brain On Porn
comments: စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိချက်။ တစ်ဦးကြားနေရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူအမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုတုန့်ပြန်အစီရင်ခံတင်ပြ ဓာတ်ပုံများတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားထက်။ တနည်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှယောက်ျား desensitize ။ porn ကြည့်လည်းအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေ desensitize ပါသလား?
J ကိုလိင် Res ။ 2004 Aug;41(3):242-58.
နှစ်ခုလုံး S1, Spiering M က, Everaerd W က, Laan E ကို.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသဘောအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်စိတ်နိုးထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ action ကို generate ရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်တိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်များတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပါဝင်သူတစ်ဦးကြားနေတစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်အင်္ဂါကိုတိုင်းနှင့် ရုပ်ရှင်မှပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအလည်အပတ်ခရီးအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။
စမ်းသပ်မှု2ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်ထိတွေ့သင်တန်းသားများကိုကြားနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏လိင်စိတ်နိုးထ rated ထားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် ဓာတ်ပုံများကို။ လိင်ပုံ rating အချိန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများအတွက်အညွှန်းကိန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လိင်ဓါတ်ပုံတွေကိုမှတုန့်ပြန်ကျောရိုး tendinous (T) ကိုတုံ့ပြန်မှုများ၏မော်ဂျူဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, ဒါပေမယ့်မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ထိုကြားနေအခြေအနေသင်တန်းသားများအဘို့ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အခြေအနေသင်တန်းသားများအဘို့အမြင့်မားခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုးများနှင့်တုန့်ပြန်ပါသေးပုံကြားနေရုပ်ရှင်အခြေအနေသူတို့အဘို့ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အခြေအနေသင်တန်းသားများအဘို့အမြင့်မားကြဘူးပါတယ်။
ထို့အပြင်ကြားနေရုပ်ရှင်မြင်၏ယောက်ျားနေဆဲဖို့ သာ. ကြီးတုန့်ပြန်ပြသ ဓါတ်ပုံတွေ လိင်ရုပ်ရှင်မြင်၏ယောက်ျားထက်။ ရလဒ်အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် Generating အရေးယူသဘောထားတွေနဲ့အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်လိင်စိတ်နိုးထများ၏မြင်ကွင်းကိုထောက်ခံပါတယ်။